SARCOIDOSIS Consulting DIRECTORY
SarcoidosisUK လူနာသူတို့ရဲ့ sarcoidosis များအတွက်အထူးကုစောင့်ရှောက်မှုရှာကြံတဲ့အခါမှာတစ်ဦးလွှဲပြောင်းမှုအတွက်မေးမြန်းဖို့ရာအတိုင်ပင်ခံနားလည်အပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ အောက်က Sarcoidosis အတိုင်ပင်ခံ Directory ကိုဗြိတိန်အနှံ့လူသိများအထူးကုတစ်ကြီးထွားလာဒေတာဘေ့စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထိရောက်သောစောင့်ရှောက်မှုအားဤအတားအဆီးကိုဖယ်ရှားကူညီရန်လူနာများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများများအတွက် tool အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
'' လိပ်စာ '' အားဖြင့်ရှာရန်: တစ်ဦးကိုဗြိတိန်စာပို့သင်္ကေတ, မြို့သို့မဟုတ်မြို့ကိုသုံးပါ။
'/ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုစသည်တို့ကိုအတိုင်ပင်ခံအမည်ဖြင့်' 'အားဖြင့်ရှာရန်: တိကျတဲ့ keyword ကိုရှာပါ။ ထိပ်ဖျား: ဥပမာအားဖြင့်ရှာဖွေရေး '' အဆုတ် 'နဲ့' အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ '' အဖြစ် '' အဆုတ် '' အဘို့, အခြားရွေးချယ်စရာစကားလုံးများကိုသုံးပြီးကြိုးစားပါ။
အချင်းဝက်မျဉ်း: သငျသညျအနီးအတိုင်ပင်ခံတွေ့ရှိရန်ရှာဖွေရေးအချင်းဝက် (မိုင်) Adjust ။ သင်တစ်ဦးလိပ်စာထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြပါလျှင်အဆိုပါအချင်းဝက် function ကိုသာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိပ်ဖျား: ဗြိတိန်၏မြေတပြင်လုံးကိုရှာ 500 မိုင်ကို select ရန်။
Reset: ဒါကအားလုံးရှာဖွေရေး options များ reset လုပ်တယ်။
If your consultant is not on the list and you think they should be added, we would love to hear from you. Please send their name and hospital an an ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်က.
If you areaconsultant and would like to be listed, please ထိတွေ့ရ.
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဤသတင်းအချက်အလက်မကြာသေးမီက SarcoidosisUK ကစိစစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျမတို့ကလည်းဘယ်မမှန်ကန်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်မည်သည့်အဆင်မပြေရလဒ်အဖြစ်စေမဆိုအသေးစိတျပြောင်းလဲတာဝန်ရှိသည်ကျင်းပရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျမှားယွင်းမှုတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ချင်ပါတယ်ပေးပါ။
အမျိုးအစား: အားလုံးအာရုံကြော နှလုံးရောဂါ မျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာ Interstitial အဆုတ်ရောဂါ (ILD) ဒူထာဗေဒ အရေပြား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ
Sarcoidosis အသုံးအများဆုံး Interstitial အဆုတ်ရောဂါများ (ILD) ၏တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ directory ထဲတွင်အဆိုပါ sarcoidosis အထူးကုထဲကအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ NHS ယုံကြည်မှုအတွက်အတွင်းအလုပ်လုပ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်နီးကပ်စွာအတူ ILD န်ဆောင်မှုများပါလိမ့်မယ်။ အောက်တွင်ဗြိတိန်အနှံ့ key ကို ILD စင်တာများများစာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစာရင်းကို 1 ပေါ်တွင်အခြေခံသည်) BLF ဒေတာ, 2) NHS အင်္ဂလန် ILD အထူးကုဝန်ဆောင်မှုပေါ်လစီ နှင့် 3) SarcoidosisUK အသိပညာနှင့်အဆက်အသွယ်။
ဤအချက်အလက်ထိပ်အထူးကုစင်တာများ UK ရှိ sarcoidosis စောင့်ရှောက်မှုအဘို့အဘယ်မှာရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရှိသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် မဟုတ် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပြည့်စုံစာရင်းနှင့်တစ်ခုသာလမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုရပါမည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Cheshire နှင့်မာဆေးဆိုက် Aintree တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အရှေ့ Midlands တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ Leicester NHS Trust မှ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အရှေ့ Midlands ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ NHS Trust မှ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အရှေ့ Midlands -Norfolk နှင့် Norwich တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အင်္ဂလန်၏အရှေ့ Papworth ဆေးရုံ NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အနောက်တောင် တော်ဝင် Devon & Exeter ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Trust မှ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အနောက်တောင် မြောက်အမေရိက Bristol က NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန် University College London မှဆေးရုံ NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန် တော်ဝင် Brompton & Harefield NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန် Guy ရဲ့ & St သောမတ်စ် '' NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန် Imperial College ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု NHS Trust မှ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ သာ. ကွီးမွတျမန်ချက်စတာ, Lancashire
နှင့်တောင် Cumbria တောင်ပိုင်းမန်ချက်စတာ NHS ဖောင်ဒေးရှင်းက Trust ၏တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Thames Valley ကို အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကဆေးရုံတွေ NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Wessex တက္ကသိုလ်ဆေးရုံဆောက်သမ်တန် NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Wessex ပို့စ်မောက်ဆေးရုံတွေ NHS Trust မှ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Yorkshire နှင့် Humber လိဒ်သင်ကြားရေးဆေးရုံများ NHS Trust မှ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Yorkshire နှင့် Humber ရှက်ဖီးသင်ကြားရေးဆေးရုံများ NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Yorkshire နှင့် Humber Hull နှင့်အရှေ့ Yorkshire ဆေးရုံတွေ NHS Trust မှ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းအင်္ဂလန် Tyne ဆေးရုံတွေ NHS ဖောင်ဒေးရှင်းက Trust မှအပေါ်သို့နယူးကာဆယ်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ West Midlands မှာလည်း တက္ကသိုလ်ဆေးရုံဘာမင်ဂမ် NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မြောက်အမေရိက Midlands မြောက်အမေရိက Midlands NHS Trust ၏တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ
စကော့တလန် စကော့တလန် သာ. ကြီးမြတ်သည် Glasgow & Clyde
စကော့တလန် စကော့တလန် Grampian
စကော့တလန် စကော့တလန် Lothian
ဝေလနယ် ဝေလနယ် ကာဒစ်ဖ်နှင့်ခြိုငျ့တက္ကသိုလ်ကနျြးမာရေးဘုတ်အဖွဲ့
ဝေလနယ် ဝေလနယ် Aneurin Bevan တက္ကသိုလ်ကနျြးမာရေးဘုတ်အဖွဲ့
ဝေလနယ် ဝေလနယ် Abertawe BRO Morgannwg တက္ကသိုလ်ကနျြးမာရေးဘုတ်အဖွဲ့
ဝေလနယ် ဝေလနယ် Betsi Cadwaladr တက္ကသိုလ်ကနျြးမာရေးဘုတ်အဖွဲ့
မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် အနောက်တိုင်း Trust မှ
မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် မြောက်ပိုင်းကိုးစားလော့
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အရှေ့တောင် Brighton နှင့် Sussex တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ NHS Trust မှ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Yorkshire နှင့် Humber နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် Yorkshire ဆေးရုံတွေ NHS Trust မှ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန် ဘုရင့်ကောလိပ်ဆေးရုံမှ NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ကိုးစားပါ
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဒေသများသာညွှန်ပြကြသည်။ အတော်များများကစင်တာများဒေသခံသဘောတူညီချက်များနှင့်လက်တွဲအလုပ်လုပ်ပေါ် မူတည်. အပိုဆောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ Interstitial အဆုတ်ရောဂါအပေါ်ဗြိတိန်အဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှအစီရင်ခံစာ (Interstitial အဆုတ်ရောဂါ, စက်တင်ဘာလ 2017 နှင့်အတူလူများအတွက်ထိရောက်သောစောင့်ရှောက်မှုလမ်းကြောင်းအောင်ပိုကောင်းစောင့်ရှောက်မှုများအတွက်တစ်ဦးကမြေပုံ) မှအဆင်ပြေအောင်သတင်းအချက်အလက်